Kenya oo Shidaal ka Baaranaysa 3900 Sq Km ee Gudaha Dhulbadeedka aagga Raas Kambooni ee Jamhuriyadda Soomaaliya | Somaale.com
Guddi labada dal (Ingriis-Talyaani) waxay xilligaas u xilsaareen arrinta xadaynta waxay ogaadeen in ay jiraan lix jasiiradood oo ku dhaw Raas Kambooni. Mid jasiiradahaas kamid ah waxay ku dhagan tahay Raas Kambooni, 5-ta kale waxay qiyaastii 2km dhanka Koonfur-Galbeed kaga aaddan yihiin Raas Kambooni, waxaana loo yaqaan Lama Shaaqa (Isolotti Lamasciaca ama “Diua Damasciaca”). Jasiiradahaas tan Koonfurta ugu xigta waa dhagac weyn oo cabbirka dhexroorkiisu yahay 50 mitir. Heshiiskaas waxaa si qeexan ugu qoran in “Jasiiradaas yar ee Koonfurta ugu xigta 5-ta jasiiradood ay tahay barta xadaynaysa badda Kenya iyo Soomaaliya. (Waa haddii marka hore aan laga hadlin NFD oo xadku halkaas dhanka Koonfureed ka sii xigi karo.)
Waxaa dhici karta in Kenya si indha-sarcaad ah ugu andacooto in jihada xarriiqda ay u samaysay xadka ay la wadaagto Soomaaliya tahay mid la barbarro ah jihada xarriiqda xadaysa Kenya iyo Tanzania. Ugu horayn juquraafi ahaan waa kala duwan yihiin labada xad, waayo xarriiqda xadaynaysa Kenya iyo Tanzania waxaa xanibaya jasiirad ay leedahay Tanzania oo aan xeebta aad uga fogeyn, taas oo lagu magacaabo Pemba (oo loo yaqaan ‘Al Jazeera Al Khadra’ ama jasiiraddii cagaarnayd, taas oo dhanka Waqooyi ka xigta Zanzibar).
Jawaabta Su’aashii kor aan kusoo xusnay, waxaa laga sugayaa Baarlamaanka iyo Shacabka Soomaaliyeed, maadaama Dowladdaha meel ku gaarka ah ee Shariif Axmed ay xogtaas u ogaayeen si toos ah iyo si dadbanba, inta la’ogyahayna ilaa hadda wax talaabo ah aysan ka qaadin soo xadgudubka Kenya. Goormuu soo bilowday Damaaciga Kenya ku doonayso Barriga iyo Badda Soomaaliya inay ku sad bursato? Arinta Barriga ee Gobolada NFD xiligeeda ayaan ka hadli doonaa, taariikh dheerna waa leeyihiin,hase ahaatee iyadoo kooba ka akhri isafgaradkii Caruusha ee lagu malgay NFD. Taariikhadan kooban oo aan shaacinay mar hore aan wada guud maro, si aan u ogaano, xiliga uu soo bilowday Damaaciga Kenya.
1972: Kulankii xigey ee 18-25 January1972 lagu qabtay magaalada Lagos, Nigeria ayaa Kenya waxay soo jeedisey in EEZ laga dhigo 200 nautical miles. Qoraagga Buugga “Eastern African States and the Exclusive Economic Zone”, oo ka hadlayey sababta ay Kenya u soo jeedisey in badaha lagu xadeeyo 200 mayl-badeed oo ah EEZ iyo hab fikirkii Kenya ee xilligaas waxa uu qoray sidan:
Mr. Njenga oo hoggaamiye ka ahaa waftiyada Kenya uga qayb galayey shirarka looga hadlayey xadaynta badda waxa uu qiray “Waxaa xaqiiqo ah in ay jiraan dalal leh (sheegtay) dhulbadeed ah 200 mayl-badeed oo ah TERRITORIAL SEA, sida dalal ka mid ah Latin America iyo dalal Afrikaan ah oo ay ku jiraan Soomaaliya iyo Sierra Leone.” Waxana uu Mr. Njenga intaas raaciyey “Fursadda keliya oo jirta si dalalkaasi ay uga laabtaan meesha ay ka taagan yihiin go’aanada qaran ee ay hore gaarey, waa in la soo jeediyo nidaamka EEZ oo ah 200 mayl-badeed oo lagu casumo, taas oo ah fursadda ugu weyn oo ay ku aqbali karaan xad caalami ah.”
Qoraaga Buugga oo sii watey hab fikirkii Kenya ee xilligaas waxa uu qoray: “Soo jeedinta Kenya ay soo jeesidisey in la qaato nidaamka EEZ oo ah 200 mayl-badeed, waxaa arrintaas ku sababay ayadoo ay jireen dalal leh 200 mayl-badeed oo ah Territorial Waters. Soo jeedintaas Kenya ee EEZ waxay markaas rajaynaysey in ay dalalkaasi ka tanaasulaan 200 mayl-badeed oo ah Territorial Waters, kuna bedeshaan 200 mayl-badeed oo ah EEZ.”
Waftigii Soomaaliyeed ee shirarkaas ka qayb galay oo si kulul u diidanaa qorshaha EEZ, waxaa hadalkoodii shirarka ka soo jeediyeen ka mid ahaa: “Arrinta caqli galka ah ee xadka Badda ee Qaranku leeyahay waa in ay ahaato Dhul-badeed ah Territorial Sea, ee ma aha in ay ahaato Aagga Dhaqaale EEZ (Exclusive Econmic Zone). Dalalka soo koraya waxaa faa’iido ugu jirtaa oo dan u ah in dhulbadeed kooda Territorial Water uu ku xadaysan yahay 200 maylbadeed.” Waxaan waftiga Soomaaliyeed ay si qayaxan u sheegeen muhiimadda ay leedahay Territoril Waters, isla markaana hab fikirka EEZ uu yahay mid khaldan oo aan la socon karayn waaqaca.
August 1972 ayey ahayd isku daygii ugu horeeyey ee Kenya ay guddigii Seabed Committee u gudbisey qoraal (draft) ay ku taageereyso “In dhammaan dalalka dhul-badeedkooda territorial Waters lagu xadido 12 mayl-badeed”.
Agoosto 1, 2009 ayaa baarlamaanka DFKMG si aqlabiyad ah heshiiskaas uga dhigay WAXBA KAMA JIRAAN. Go’aankaas baarlamaanka Soomaaliya muddo 8 bilood ah ayuusan soo dhaafin xafiisyada xukuumaddii Cumar C/rashiid iyo Sheikh Shariif, muddaddas kaddib ayaa loo gudbiyey QM. Waxaana u gudbiyey QM qaar kamid ah Mudanayaasha Baarlamaanka.
Sida sharciga ah ee DFKM ugu qoran Dastuurka waa in Madaxwaynaha uu saxiixo, kadib markii Baarlamaanku soo gudbiyo, kadibna u gudbiyo cida ay khusayso iyo hay’adaha fulinta, taasi weli dhicin (Oct 14, 2011), sababtana DFKM ayaa la waydiinayaa, la xisaabtan kaasna waxaa is leh Baarlamaanka.
Axdiga DFKMG, Qodobkiisa 36aad oo ku saabsan “SHARCI DEJIN”, waxa uu dhigayaa sidan:
SomaliTalk waxay dhammaan Muwaadinka Soomaaliyeed leedahay “Faanoole fari kama qodna” – Difaacidda Badda Soomaaliyeed ka seexad ma leh.
waa sheeko gaaban kala soco bogaan waa sheeko jaceyl ah oo dhab ah ma ahan qiyaali Qeeybtii 3 sadxaad
Videos: Mutamarkii 12aad ee uu soo qaban qaabiyey Masjid Abuubakar ee Seattle Washington 0